Xiisad ka dhalatay dilka Mas’uul ka tirsanaa Dowladda Somalia oo Cirka isku shareertay | AllJubbalandnews
Xiisad ka dhalatay dilka Mas’uul ka tirsanaa Dowladda Somalia oo Cirka isku shareertay
MUQDISHO: ─ Taliyihii hore ee Nabadsugida Soomaaliya Gen. Cabdullaahi Gaafoow ayaa darawalkiisa wuxuu shalay dilay nin ka mid ah hawlwadeenada Maxkamada Sare ee dalka oo kasoo jeeda waqooyiga, kaasoo dadkiisu ay diideen in la aaso, inta maxkamad lasoo taagayo gacan ku dhiigalaha.
Gen. Gaafoow ayaa la sheegay in arrintu ay ku culus tahay, lagana doonayo in ninka dilka geystay uu maxkamad horkeeno, waxaana la sheegay inuu ku dhammaaday burbur kulan dhexmaray labada beelood ee kala ah Isaaq iyo Mursade.
Marxuumka la dilay ayaa ka ahaa maxkamadda sare kaaliye, waxaana lagu sheegay magaciisa Mursal Cumar Cismaan, iyadoo dilkiisa uu dhacay markii uu darawalka Gaafoow ku toogtay guri ay wada degenaayeen oo Muqdisho ku yaalla.
Darawalka Gaafoow ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay kaaliyaha oo ay wada-daganaayeen guri ku yaalla Degmada Waaberi, wuxuuna sidoo kala dhawaacay haweeney guriga wax ka daganeyd.
Illaa iyo hadda lama oga sababta keentay inuu Darawalka Gaafoow dilo mid ka mid ah kaaliyeyaasha Maxkamadda Sare oo deegaan ahaan kasoo jeedo Woqooyiga Soomaaliya.
Gen. Gaafoow iyo Mustaf Dhuxulow ayaa an iyo shalay kulammo kala duwan la leh ehellada marxuumka la dilay, inkastoo beeshiisa ay diidan tahay inay wax xaal mastuur ah ka galaan dilka marxuumkooda.
Xiisadda ka dhalatay dilkan ayaa cirka isku shareertay, waxaana laga yaabaa inay Dowladda Somalia faragelin ku sameyso, maadaama ay horey u soo xirtay ilaaladii Hanti dhowraha qaranka oo dilay Wasiirki Howlaha Guud ee Somalia Cabaas C/llaahi Siraaji.
Ugu dambeyn Ra’iisul Wasaare Kayre ayaa laga sugayaa inuu Arrintan ka hadlo, si ay cadaaladda u noqoto mid loo siman yahay oo aysan dhinac u leexan, waxayna noqon doontaa mid cadaalad ah haddii maxkamad lasoo taago Gaafoow iyo darawalkii dilka geystay.